किन किन्ने फोन ?- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
किन किन्ने फोन ?
वैशाख २७, २०७६ हेलो शुक्रबार
मोबाइलको बिक्री घट्नुको कारण के होला ? धेरैको विश्वास छ, मोबाइलमा नयाँ चीजको अभाव हुँदै गएको छ  । बजारमा जुनसुकै मोबाइल आओस्, त्यसको क्यामेराको सुधार र स्क्रिन साइजको आकारबाहेक धेरै कुरा समान हुन थालेका छन्  ।
र, जुन मोबाइल आफ्नो ब्रान्डको सबैभन्दा राम्रो भनेर बजारमा सार्वजनिक गरिन्छन्, तिनको मूल्य सामान्य मानिसले छुनै नसक्ने गरी बढेको छ ।
पट्याउन मिल्ने फोन, यति ब्याट्री टिक्ने फोन, यस्तो स्क्रिनको फोन । हरेक महिनाजसो केही न केही विशेषतासहितको फोनहरू बजारमा आइरहेका छन् । मोबाइल उत्पादक कम्पनीका आकार र उनीहरूले सार्वजनिक गर्ने विविधतायुक्त स्मार्टफोनहरूको संख्या हेर्दा बर्सेनि मोबाइल बजार बढ्दो देखिन्छ । मोबाइल बिक्रीको विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्दा भने यो धारणा गलत सावित हुन्छ ।
सन् २०१९ को पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै कोरियाली ब्रान्ड सामसङले आफ्नो सञ्चालन नाफामा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो । चीनमा बिक्री घटेको भन्दै अमेरिकी कम्पनी एप्पलले सन् २०१९ मा बिक्री हुने अनुमान गरेको आइफोनको संख्या घटाइसकेको छ । बरु, यसले आफ्नो ध्यान टेलिभिजन बिक्री, म्युजिक र भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा र पेमेन्ट सर्भिसतिर लगाइरहेको छ । फेब्रुअरीसम्मको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा ठूलो मोबाइल बजार चीनमा स्मार्टफोनको बिक्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले घटेको छ । चीनको चाइना एकेडेमी अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चीनमा स्मार्टफोनको बिक्री ६ वर्षयताकै सबैभन्दा कम छ ।
युरोपमा पनि स्मार्टफोन बिक्रीमा उल्लेख्य कमी आएको विभिन्न अनुसन्धान कम्पनीको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१३ र २०१८ को बीचमा युरोपमा स्मार्टफोनको बिक्री २३ प्रतिशतले घटेको अमेरिकी रिसर्च कम्पनी सीसीएसइन्साइटले जनाएको छ । भारत र अफ्रिकी मुलुकको अपवाद छाड्ने हो भने संसारभर नै मोबाइलको बिक्री घटिरहेको यो कम्पनीको तथ्यांक छ । तर, मोबाइल बजारका हिसाबले आशा गर्ने ठाउँ भारत मात्र बाँकी छ । उसका ठूलो जनसंख्या अझैं मोबाइल सेवामा जोडिनै बाँकी छ, यसले मोबाइल उत्पादकहरूलाई आशा त देखाएको छ तर मूल्यसहित । अहिले भारतमा कम्पनी स्थापना गर्न मोबाइल उत्पादकहरूबीच तँछाडमछाड नै छ ।
मोबाइलको बिक्री घट्नुको कारण के होला ? धेरैको विश्वास छ, मोबाइलमा नयाँ चीजको अभाव हुँदै गएको छ । बजारमा जुनसुकै मोबाइल आओस्, त्यसको क्यामेराको सुधार र स्क्रिन साइजको आकारबाहेक धेरै कुरा समान हुन थालेका छन् । र, जुन मोबाइल आफ्नो ब्रान्डको सबैभन्दा राम्रो भनेर बजारमा सार्वजनिक गरिन्छन्, तिनको मूल्य सामान्य मानिसले छुनै नसक्ने गरी बढेको छ । धेरै राम्रो भनेर महँगो मूल्य राखिएको स्मार्टफोनमा त्यस्तो फिचर केही जुन जसको प्रभाव मानिसको दैनिक जीवनमा व्यापक परोस् र मानिसले मूल्य माया मारेरै भए पनि किनुन् । मानिसको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने खालका फिचरहरू मध्यम मूल्यका फोनमा पनि छँदैछन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हेरौं । केही महिना अघि मात्रै सामसङ र चिनियाँ कम्पनी हुवावेले लामो समयको प्रतीक्षा तोड्दै पट्याउन मिल्ने स्मार्टफोन सार्वजनिक गरे । पछिल्ला दसमा आएका स्मार्टफोनभन्दा फरक विशेषता भएका यिनका मूल्य २ हजार डलर बढी तय गरिएको थियो । पट्याउन मिल्नेबाहेक यी स्मार्टफोनमा अन्य के विशेषता थिए र प्रयोगकर्ताले यत्रो मूल्य तिर्ने ?
धेरै विश्लेषकको अनुमान छ, फाइभी प्रविधिको द्विविधाका कारण पनि मानिसहरू महँगा मूल्य तिरेर अहिले फोन किन्न चाहिरहेका छैनन् । अहिले गरिएको चर्चाअनुसार फाइभी नेटवर्क यति तीव्र हुनेछ कि १५ मिनेटको भिडियो एक सेकेन्डमा डाउनलोड हुनेछ । आफ्नो फोनबाटै घरमा वा कार्यालयमा भएका स्मार्ट डिभाइसहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यति तीव्र गतिको नेटवर्क सन् २०१९ मा केही सहरहरूमा परीक्षणका रूपमा सुरु हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, फाइभी नेटवर्कको विस्तार सोचेभन्दा धेरै धिमा गतिमा भइरहेको छ । न त यसको कतै परीक्षण भएको न त कुनै कम्पनीले फाइभी रेडी डिभाइसहरू नै बजारमा ल्याएका छन् ।
कुनै समय नयाँ स्मार्टफोन किनेर त्यसैमा घन्टौं भुल्दा गर्व गर्ने ग्राहक मनोविज्ञानमा अहिले परिवर्तन आएको धेरै विश्लेषकको बुझाइ छ । प्रविधि कम्पनीको नेतृत्व गरेर नाम कमाएकाहरू नै सकेसम्म कम समय फोनमा भुल्नमा सुझाव दिइरहेका छन् । स्मार्टफोन निर्माता आफैंले फोन कम चलाउन सहयोग गर्ने गरी विभिन्न फिचरहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् जसले प्रयोगकर्ताले आफूले कतिबेर कुन प्रयोजनका लागि स्मार्टफोन गरे, थाहा होस् । यस्तै अभियानका कारण पनि धेरैमा नयाँ–नयाँ स्मार्टफोन किनिहाल्न हतार नगर्ने चलन बढेको छ ।
सीसीएसइन्साइटले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षले पनि यही भन्छन् । युरोपमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा ३५ प्रतिशतले उत्तरदाताले आफूले यसअघि प्रयोग गरेको स्मार्टफोनभन्दा अहिले हातमा रहेको स्मार्टनफोन बढी समय चलाउने मनसाय रहेको बताएका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ १२:१७
गुगलमा हिस्ट्री डिलिटको नयाँ फिचर
गुगल म्याप खोलौं वा गुगलको कुनै एप  । यो कुनै न कुनै रूपमा कहीं बसिरहेकै हुन्छ  ।
हामी म्याप खोलेर डुलेको वा एप प्रयोग गरेको हिस्ट्रीका रूपमा रहिरहन्छ । अब गुगलले यसलाई डिजिट गर्न सकिने फिचर सुरु गर्ने भएको छ । प्रयोगकर्ताले अबको केही समयमै गुगल एकाउन्टको सेटिङ अप्सनमा यो फिचर प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
सेटिङमा यो वेब एन्ड एप एक्टिभिटीको नाममा रहनेछ । यसले प्रयोगकर्तालाई तीन महिनापछि वा १८ महिनापछि आफ्नो वेब र एप एक्टिभिटी डिलिट गर्ने सुविधा दिनेछ । एकपटक समय सेट गरेपछि त्यसपछि स्वतः उक्त समयपछि सबै हिस्ट्री डिलिट हुनेछ ।